Gabriela Garcia Calderon: Fito taona ary mbola mitohy ny fanisana… · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jolay 2019 7:42 GMT
Ny valinteny ho an'ireo fanontaniana roa voalohany dia “eny”, ny fahatelo kosa “tsia”. Ka namoronany kaonty tamin'ny anarako aho ary nangataka ahy handika lahatsoratra fohy rehefa avy nanome torolalana vitsy ho ahy momba ny fomba hanatanterahana ireo asa rehetra vaovao ireo izy. Tena nahafinaritra ny nahita ny dikan-teny navoaka ny ampitso.
Avy eo dia tonga ny hevitra hanombohana bilaogy. Ny fanontaniana mipetaka ho mandrakizay: inona no hosoratako? Inona ny lohahevitra fantatro bebe kokoa? Izaho, ny tenako, izay manodidina ahy. Ka teraka teo ny bilaogiko, mitondra anarana manokana, Seis de enero, 6 Janoary, izay efa fantatry ny olona sasany, datin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako. Singa hafa izay nahatonga ny taona 2007 ho fahatsiaro izany.
Roa taona taty aoriana, nanasa ahy hanoratra momba an'i Però ny tonian-dahatsoratry ny Amerika Latina Eddie Avila. Noho izany, ity ny lahatsoratro voalohany, miaraka amin'ny fandikan-teny.